Izinto ezi-4 Abathengisi abanokuziFunda kwiDatha yoSuku loMama ukuphucula iMikhankaso yoSuku lukaTata | Martech Zone
Ngokukhawuleza nje uthuli luhlala kwimikhankaso yoSuku loMama kunokuba abathengisi bajonge uMhla kaTata. Kodwa ngaphambi kokubeka imisebenzi yoSuku lukaTata elityeni, ngaba abathengisi bangafunda nantoni na kwiinzame zoSuku loMama ezinokubanceda ukuba bathuthukise ukuthengisa ngoJuni?
Emva kohlalutyo olucokisekileyo loSuku loMama lwango-2017 lokuthengisa kunye nedatha yokuthengisa, sikholelwa ukuba impendulo nguewe.
Kwinyanga ekhokelela kuSuku loMama, iqela lethu laqokelela idatha evela ngaphezulu kwe-2,400 abathengisi abakwi-Intanethi abanxulumene nokushiya inqwelo, ukuthengisa kwakhona nge-imeyile, ukuguqula kunye nentengiso. Ii-e-tailers esizifundileyo bezikwimizi-mveliso emihlanu- Impahla, izihlangu & ubuqu; Ivenkile zeSebe; Ukutya nokusela; Imveliso noLonwabo; kunye nabathengisi abakhethekileyo.
I-infographic yethu engezantsi inikezela ngesishwankathelo esipheleleyo sedatha, kwaye nazi iingongoma ezimbalwa ekufuneka abathengisi bazigcine engqondweni njengoko beqhuba imikhankaso yoSuku lukaBawo ka-2017.
Intengiso yoSuku looMama ayikhange inyuke de kube kufutshane neHolide
Ngelixa ukuthenga iiholide ezinkulu zikaDisemba kuzuza amandla amakhulu ngo-Okthobha nango-Novemba, okufanayo akunakuthethwa ngoSuku loMama. Intengiso yeencopho yayi ngoMeyi 8th, kwiveki enye phambi koSuku loMama. Into enomdla kukuba olona suku ludumileyo lwabathengi lokuthenga kwifowuni lwalungoMeyi 13th, eyayiyisika ngokusondeleyo!
Kubathengisi abacwangcisa iinzame zoSuku lukaBawo, olona suku lukhulu lokuthatha uMama kukuba nomonde. Ngokuqinisekileyo kubalulekile ukuqala kwimizamo yokuthengisa kaTata kungekudala kunokuba kamva. Kodwa musa ukothuka ukuba ukuthengisa akuthathi kude kube semva kweSikhumbuzo
Ukumaketha nge-imeyile kwakuyeyona ndlela isebenzayo ngeVeki engaphambi koSuku loMama
Akumangalisi ukuba usuku lokuthengisa oluphezulu lwaluyimini apho ukuthengisa kwakhona nge-imeyile amaxabiso avulekileyo ayephezulu.
Ngomhla kaTata, qiniseka ukuba ucwangcisa "ithuba lokugqibela" lomkhankaso we-imeyile kwiveki engaphambi kukaJuni 18. Abathengi bazixabisile ngokucacileyo ezi zikhumbuzi zoSuku loMama, kwaye kuya kuba njalo nangoSuku lukaTata.
Amaxabiso okulahlwa atyhilwe kwiintsuku eziKhokelela kuMhla kaMama
Idesktop kunye nentengiso yeselfowuni inokuba ibiphezulu kwiveki ekhokelela kuMhla woMama, kodwa kunjalo nenqanaba lokushiya inqwelo. Kulo nyaka, nge-11 kaMeyi kuye kwabonwa elona zinga liphezulu lokulahla kuzo zonke iintsuku kwinyanga ekhokelela kwiholide- iipesenti ezingama-89 ezimangalisayo.
Ngomhla kaTata, zama ukumelana nala manqanaba aphezulu okulahla kwiveki ekhokelela kwiholide ngokunikezela ngenkuthazo eyongezelelweyo. Ukuba unganakho ukuhlawula simahla, okuqinisekisiweyo, kunokunceda ukunciphisa inkxalabo yabathengi ngomzuzu wokugqibela yokuba izipho zabo aziyi kufika ngexesha.
NgoLwesibini ibiziNtsuku zokuThengisa eziDumileyo, kwaye iMigqibelo ibiyeyona
Abathengi boSuku loMama basebenzise ngokucacileyo phakathi evekini ukukhangela, kunye neempelaveki zokuthenga. Ukuba ufuna ukwandisa ukuthengisa phakathi evekini ekhokelela kuJuni 18, jonga ukuqhuba kweentsuku zaphakathi evekini. Umzekelo, ukunyuselwa kweeyure ezingama-24 ngooLwezibini kukhokelela kuMhla kaTata onikezela isaphulelo kuko konke ukuthengwa, okanye isipho sasimahla, kunokuhamba indlela ende kukonyusa ukuthengisa ngoLwesibini.
Kuba abantu sele bezimisele ukuthenga ngeempelaveki, abathengisi bangaqhuba amaphulo ngeempelaveki ezikhumbuza abantu ukuba bathenge izinto ngoSuku lukaTata, kwaye bangaboneleli ngenkuthazo yokwenza oko.
tags: 2017e-commerceeCommerceimikhwa ye-ecommerceUsuku lomama
Meyi 29, 2017 kwi-10: 57 PM
Wowu. Enkosi ngokwabelana ngezi zibalo Terri! Iluncedo kakhulu. Bendizibuza, leliphi ixesha lomhla elisebenza ngakumbi xa kuthunyelwa iileta zeendaba ze-imeyile?